तपाईको साना साना नानी बाबुको चिया पिउने लत छ ? सावधान यस्ता असरहरु देखिन सक्छन्, आजबाट नै छुटाइहाल्नुहोस् बानी – Gazabkonews
तपाईको साना साना नानी बाबुको चिया पिउने लत छ ? सावधान यस्ता असरहरु देखिन सक्छन्, आजबाट नै छुटाइहाल्नुहोस् बानी
बच्चा र बयस्कहरुमा चियाको असर अलग अलग हुन्छ । त्यसैले बच्चाको स्वास्थ्यमा चियाको नकारात्मक असर हुन्छ ।चियामा कफिनको मात्रा धेरै हुन्छ । जसले दिमागमा नशाको काम गर्छ । यदि तपाईको बच्चा धेरै चिया पिउँछ भने यसको असर मांसपेशी, मस्तिष्क र नर्भस सिस्टममा पनि पर्छ । शारीरिक विकासमा पनि नराम्रो असर पर्छ ।
थोरै वा कहिलेकाही चिया पिउँदा भने नकारात्मक असर पर्दैन तर धेरै चिया पिउने बानी छ भने विभिन्न समस्या निम्तिने खतरा हुन्छ ।बच्चाले धेरै चिया पिउँदा हुने असर–हड्डिमा दुखाई हुन्छ, खासमा खुट्टामा दुख्छ ।–व्यवहारमा बदलाव हुन्छ ।–मांसपेशी कमजोर हुन्छ ।–निद्रा कम हुन्छ ।–टाउको दुख्छ ।–बच्चाको शारीरिक विकासमा प्रभाव पार्छ ।
तपाईको बच्चाको चिया पिउने बानी छ भने आजैबाट छुटाउनुहोस,यस्तो असर पर्छ बच्चाको स्वस्थमा
यी राशि भएका पुरुषले श्रीमतीलाई रानी बनाएर राख्छन् !
3.सिंह राशीः उक्त राशी भएका पुरुषहरु पत्नीले भन्दा बढी माया गर्ने गर्छन् । तर यो राशी भएका पुरुषहरु अरु राशी भएका भन्दा जिद्दी र रिसालु स्वभावका हुन्छन् । यो राशी भएका पुरुषहरुको जोडी एकअर्कालाई बुझ्न सक्ने भएकाले उनीहरुको घर व्यवहार सहज ढंगले चलाउन सक्छन् । 4.कन्या राशीः खुल्ला हृदय भएका यो राशीका पुरुषहरुको प्रेम सम्बन्ध बलियो हुन्छ । उनीहरु आफ्नो पत्नीको प्रेममा गहिरोसँग डुबेका हुन्छन् । घरायासी काम बाहेक सामाजिक काममा पनि अग्रसर रहने हुनाले मान र प्रतिष्ठा पाउने गर्छन् ।
1.वृश्चिक राशीः यो राशी भएको पुरुष सबैको प्यारो हुने गर्छन् । आफ्नो जिम्मेवारी प्रति बफादार हुने भएकाले परिवारको मात्र नभएर समाज प्रति पनि निकै जिम्मेवारी रही हेरचाह गर्ने गर्छन् । सामाजिक काममा सधै व्यस्त रहने भएकाले यो राशी भएका व्यक्ति मान सम्मान पाउने गर्छन् । ओएसनेपालका लागी काम गर्दै आउनु भएका ज्योतिषी सुराचार्यका अनुसार परिवारको प्यारो मान्छे पत्नीहरुको प्रेममा पागल हुने गर्छन् भने एकअर्कालाई राम्रो सँग बुझेको हुन्छन् त्यसकारण उनीहरुले सखी जीवन बिताएका हुन्छन् ।